dang Archives - नेपाल आज
घोराइमा ट्रकको ठक्करबाट २ घाइते, उपचारका लागि हेलिकप्टबाट काठमाडौँ लैजाने
माघ – १९ । तुलसीपुरको घोराहीमा बुधवार विहान ट्रकले स्कुटीलाई ठक्कर दिँदा दुईजना महिलाहरु घाईते भएका छन् । सवारी चलाउने महिलाको अवस्था सामान्य भएता पनि पछाडी बसेकी घोराही ६ निवासी ३० बर्षीया वशन्ता गौतमको अवस्था गम्भिर रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय घोराही दाङले जानकारी दिएको छ । सवारी चालक घोराही ६ निवासी ३६ बर्षीया सृजना भट्टपनि […]
गर्भवती जाँच गर्न टेलिफोनबाटै निम्ता
Posted on: November 28, 2016Posted by: Tirtha Khanal
मंसिर १३ । गर्भवती चेकजाँच गराउने मिति नजिकिएपछि गाउँघरका गर्भवती महिलाहरूलाई स्वास्थ्य चौकीबाट फोन आउँछ, ’तपाईंको गर्भ जाँच गर्ने दिन भयो, नबिर्सी आउनुस् है ।’ गर्भवतीहरू स्वास्थ्य चौकीमा आउँछन् । चेकजाँच गराउँछन् । अनि फर्किने बेलामा स्वास्थ्य चौकीले कोसेली स्वरूप आयोडिनयुक्त नुनको पोको र आइरन चक्की दिन्छ । स्वास्थ्यकर्मीहरूले सम्झाउँछन, ’अर्कोपटक बेलैमा आउनुहोला ।’ गर्भवतीलाई […]
दाङबाट १० लाख राजस्व सङ्कलन
अर्थ/बजार/दाङ कात्तिक – १६ । ट्राफिक प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को कात्तिक १५ गतेसम्ममा १० लाख १२ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । कार्यालय प्रमुख प्रहरी नायव निरीक्षक देवबहादुर केसीका अनुसार उक्त अवधिमा एक हजार आठ सय सवारी साधनका चालकलाई कारबाही गरी सो राजस्व सङ्कलन गरिएको हो । कार्यालयले साउनमा ६ सय […]
खुर्सानीको धुलो हालेर लुटपाट
Posted on: October 26, 2016Posted by: nishesh
कात्तिक – १० । दाङको तुलसीपुर बसपार्कबाट बुधबार बिहान एकजना व्यक्तिबाट १६ लाख रुपैँया लुटिएको छ। प्रहरीका अनुसार आँखामा खुर्सानीको धुलो हालेर दुर्गा लामिछानेको साथमा रहेको १० लाख भारतीय रुपैँया लुटपाट भएको हो। मोटरसाइकल चढेर आएका तीनजना नकाबधारीले लामिछानेको आँखामा खुर्सानीको धुलो हालेर रकम लुटेका हुन्। लामिछाने बुटवल वस्त्रालयमा लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारी हुन् । तुलसीपुर–१४ […]
दाङबाट चितुवाको छालासिहत दुई व्यक्ति पक्राउ
Posted on: October 5, 2016Posted by: netra
असोज–१९ । दाङमा चितुवाको छालासहित दुई जना पक्राउ परेका छन् । प्रहरीका अनुसार उनीहरुलाई गोप्य सूचनाको आधारमा दाङ देउखुरीको लमही बजारबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । पक्राउ पर्नेमा सिसहनिया गाविस वडा नं. १ निवासी ४९ वर्षीय टेकबहादुर केसी र लालमटिया गाविस वडा नं. ८ निवासी ४५ वर्षीय मुक्तबहादुर थापा रहेका छन् । पक्राउ परेकाले आफूहरु […]
कैदीद्वारा निर्मित सामाग्रीले बजार पाएन
Posted on: September 21, 2016Posted by: Tirtha Khanal
असोज ५ । दाङमा कैदीबन्दीहरुले कारागारभित्र आफ्नो सीप प्रयोग गरेर उत्पादन गरेको सामाग्रीले बजार भाउ पाउन सकेको छैन् । कैदीले निर्माण गरेका सामाग्रीले बजारभाउ नपाएपछि कैदीबन्दीहरुले गुनासोे गरेका हुन् । कारागारभित्र कैदीहरुले मुढा, टोपी, ढकिया, लेस आदि निर्माण गर्ने गर्दछन् । तर यि सामानले बजारभाउ नपाएपछि कारागार भित्रै थन्किएर बसेको कैदीहरुले बताएका छन् । सीप […]
माटोको भाँडा बनाउने पेसा सङ्कटमा
Posted on: September 20, 2016Posted by: nishesh
असाेज – ०४ । दाङका कुमाल समुदायको माटोको भाँडा बनाउने पेसा सङ्कटमा पर्न थालेको बताएका छन् । परम्परादेखि अपनाउँदै आएको माटोका भाँडा बनाउने पेसा आवश्यक कच्चा पदार्थ अभावका कारण सङ्कटमा परेको कुमाल गाउँ शान्ति उत्पादन समूहका अध्यक्ष प्रेमबहादुर कुमालले बताएका छन् । भाँडा निर्माण गर्न आवश्यक माटो, दाउरा, पराल, गुइँठालगायत कच्चा पदार्थको अभावका कारण माग […]
दाङमा भेटियाे दुर्लभ अजिङ्गर
Posted on: September 6, 2016Posted by: netra
भदौ–२१ । दाङ सिसहनीय गाविस वडा नं.५ कालापानीमा दुर्लभ प्रजातिको अजिङ्गर फेला परेको छ । १३ फिट लम्बाई १४ इन्च गोलाई र २५ केजी तौलको वयष्क अजिङ्गर फेला परेको स्थानीयले जानकारी दिएका छन् । अजिङ्गरलाई गाडीमा राखेर मंगलबार गढवा सेक्टर वन कार्यालयको एक टोलीले स्थानीय बाघनाथ बाबा सामुदायिक वन गोवरडिहामा लगेर छोडेको छ । उक्त […]
बिस्फोटक पदार्थ सहित ४ पक्राउ
Posted on: August 30, 2016Posted by: nishesh
भदौ – १४ । दाङको बिजौरी गाबिसबाट ४० थान बिस्फोटक पदार्थ डेटोनेटर र एक थान पेस्तोलसहित चार जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । बिजौरी गाबिस वडा नम्बर ९ का कमल वलीको घरबाट एक थान कटुवा पेस्तोर र एक राउण्ड गोली र ओमप्रकाश पुनको घरबाट ४० थान बिस्फोटक पदार्थ डेटोनेटर बरामद गरिएको दाङका प्रहरी उपरिक्षक धिरजप्रताप […]
दाङमा नाबालिकादेखि ६५ वर्षीया वृद्धासमेत बलात्कृत
Posted on: August 28, 2016Posted by: netra
भदौ – १२ । गत आर्थिक वर्षमा दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतमा २७ वटा बलात्कारसम्बन्धी उजुरी दर्ता भएका छन् । उजुरीमा ३ वर्षकी बालिकादेखि ६५ वर्षिया बृद्धासमेत बलात्कृत भएको उल्लेख गरिएको छ । नाबालिकादेखि अशक्त बृद्धाहरु समेत बलात्कारमा पर्ने गरेका छन । अदालतको तथ्याङ्क अनुसार दर्ता भएका २७ वटा उजुरीहरु मध्य ८ वर्ष भन्दामुनिका ६ जना, […]
Posted on: August 22, 2016Posted by: netra
भदौ – ६ । दाङको तुलसीपुरस्थित एउटा आइएमईबाट रु पाँच लाख ३५ हजार नगद चोरी भएको छ । तुलसीपुरको केन्द्रबिन्दु मानिने बिपी चोकस्थित राप्ती मनी ट्रान्सफर्मरबाट सोमबार बिहान १ बजे उक्त रकम चोरी भएको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रहरी निरीक्षक खुमानन्द पाण्डेले जानकारी दिए । सिसी क्यामेराको रेकर्ड हेर्दा बिहान चोरले उक्त आइएमईको घर्राको ताला फोडेर […]
ढिस्कोबाट खसेर एक बालकको मृत्यु
Posted on: August 21, 2016Posted by: nishesh
भदौ – ५ । दाङको चिराघाटमा ढिस्कोबाट खसेर एक बालकको मृत्यु भएको छ । शान्तिनगर ४ चिराघाट निवासी रुपलाल बिकका ६ बर्षीय छोरा विकास बिक ढिस्कोबाट झन्डै ३५ मिटर तल लडेर गम्भीर घाईते भएका थिए । घाईते बिकको राप्ती अञ्चल अस्पताल तुलसीपुर दाङको प्रारम्भिक उपचारपछि थप उपचारकालागि नेपालगञ्ज लैजादैँ गर्दा आइतबार बिहान मृत्यु बाटो मै […]
आफ्नै बाबुको हत्या पछि छोरा फरार
Posted on: August 20, 2016Posted by: nishesh
भदौ ४ । दाङमा शुक्रबार साँझ एक युवकले आफ्नै बाबुको धारिलो हतियार प्रयोग गरी हत्या गरेको छ । दाङको हाँसीपुर गाविस वडा नं. २ गोख्ले निवासी २६ वर्षीय हसन मियाँले ५५ वर्षीय बाबु अमिन मियाँको धारिलो हतियार र दाउराले आक्रमण गरी हत्या गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यलयले जानकारी दिएको हो । हसनले बाबु अमिनलाई धारिलो हतियारले […]
दाङमा १ युवक मृत फेला
Posted on: August 19, 2016Posted by: nishesh
भदौ ३ । दाङमा विजौरी ५ निवासी २६ वर्षीय हिरामणि चौधरीको हत्या भएको प्रहरीले बताएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रमुख एसपी धिरजप्रताप सिंहले चौधरीको शव मानपुर ८ मा शुक्रबार फेला परेको र उनको हत्या गएराती नै भएको हुन सक्ने बताए । चौधरी सवारी चालक भएको खुल्न आएको र घटनाको अनुसन्धान चलिरहेको प्रहरीले जानकारी […]
प्रहरीद्वारा ८ ट्याक्टर नियन्त्रण
Posted on: August 17, 2016Posted by: netra
भदौ – १ । अवैध रुपमा गिट्टी बालुवा उत्खनन गरी ओसारपसार गर्न लागिरहेको अवस्थामा आठवटा ट्र्याक्टरलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुर पातुखोलाबाट खटिएको टोलीले आज रा१त २००३, रा१त १५३४, लु२त ६२१९, रा१त १८२३, रा१त १०६४, रा१त ७०६, लु२त ६२१९, लु१त ७८०१ नंम्बरका ट्र्याक्टरलाई नियन्त्रणमा लिई आवश्यक कानुनी कारबाहीका लागि जिल्ला विकास समितिको […]
संविधान कार्यान्वयनको चुनौतीलाई सबै दल मिलेर पूरा गर्नुपर्छ : शेखर काेइराला
साउन – १५ । संविधान कार्यान्वयनको चुनौतीलाई सबै दल मिलेर पूरा गर्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाली कांग्रेस बाँके क्षेत्र नं। १ द्वारा आज कोहलपुरमा आयोजित ‘बिपी हिजो र आजको सन्दर्भ’ विचारगोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै नेता कोइरालाले मुलुकको लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, राष्ट्रियताको जगेर्नामा बिपीवाद अहिले पनि त्यतिकै सान्दर्भिक रहेको बताए । उनले मुलुकको राजनीतिले सबैको हित गर्नुपर्ने बताउँदै […]
तीन पुरुष र दई महिलाको शव राप्ती नदीकाे किनारमा
Posted on: July 27, 2016Posted by: नेपाल आज प्रभात
साउन – १२ । अबिरल बर्षापछि मंगलवार राप्ती नदीमा आएको बाढीले बगाएर ल्याएका ५ शव दाङमा भेटिएका छन् । देउखुरीस्थित राप्ती नदीको किनारमा तीन पुरुष र दुई महिलाको शव फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले जनाएको छ । ५ मध्ये एकजनाको शव भने दाङकै स्थानीयको रहेको र बाँकी ४ शवको भने पहिचान हुन सकेको छैन […]
राप्ती नदीमा १२ वर्ष यताकै सबैभन्दा ठूलो बाढी, सयाैं विस्थापित
Posted on: July 26, 2016July 26, 2016Posted by: नेपाल आज सन्ध्या
साउन – ११ । सोमबारदेखिको अविरल वर्षापछि राप्ती नदीमा बाढी आएको छ । राप्ती नदीमा मंगलबार आएको बाढी १२ वर्ष यताकै सबैभन्दा ठूलो भएको बताईएको छ । बाढीले देउखुरीका विभिन्न स्थानगरी १ सयभन्दा बढी घर डुबानमा परेका छन् । साथै ६ घर बगाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, दाङले जनाएको छ । बाढीले देउखुरीको सतबरियामा सबैभन्दा बढी […]
६ महिनाको अवधिमा मानवाधिकार उल्लङ्घनका ९५ घटना
Posted on: June 25, 2016Posted by: नेपाल आज सन्ध्या
असार ११। दाङ्ग तुलसीपुरमा छ महिनाका अवधिमा ९५ मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना भएकोएक तथ्याङ्कले जनाएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक दाङले शुक्रबकार घोराहीमा गरेको ‘मानवाधिकार वर्ष पुस्तक’मा समेट्नुपर्ने विषयवस्तुका बारेमा गरिएको अन्तक्र्रियामा इन्सेक प्रतिनिधि जेएन सागरका अनुसार ती घटना सन् २०१६ जनवरीदेखि जुन महिनासम्ममा भएका हुन् । सबैभन्दा बढी महिला हिंसाका ४८ घटना भएकामा ३५ […]